Waxaa jira dhibaato in cudurka daacuunka badan oo dadka isticmaala Android - dhibaatada qalabka Android ay gaabiyo. Inta badan, gaabiyo dhacaya, maxaa yeelay, kaydinta xogta xad-dhaaf ah iyo RAM hooseeyo. Danbayso ayaa sidoo kale sabab u noqon kara sabab u kulayl. Haddii aad jeceshahay Android, oo ay doonayaan inay u oofiyo in ay si mug leh, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida aad u nooleyn qalabka Android.
Si tartiib ah qaab ee aad telefoonka sii xumaanayso kadib mararka qaar. Telefoonnada gacanta ayaa la rabay in lagu degdeg ah oo la siiyo in ay helaan wax dhakhso. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan shaqo guri kasta oo suurta gal ma aha. Halkan waxa ku jira 10 Talooyin ilaa nadiif ah markaasaan ku noolaynay telefoonka aad Android:
1. Baro Xuduudda qalabka
Waxaa muhiim ah in la ogaado qalab aad. Baro awoodda iyo khasaaro. Tani waxay aad ka hortagi doonaa overburdening telefoonka. Waxaad awoodi doontaa in aad u maamuli lahayd telefoonka kula khayraadka la heli karo iyo sii wadida wax qabadka telefoonka ee heer mug leh.
2. Hayso qalab aad updated
Had iyo jeer waa in Waxa updates ugu rakibi sida ugu dhaqsaha badan la heli karo. Sababta ugu wayni waxay tahay horumar ku version hore iyo qamaar ee dhiqlaha. Google had iyo jeer waxay keentaa horumar cusub, waana hubaa qalabka waa ka xasilloon sameeyo, oo hantidaan qaab sare, xawaaraha iyo isku xirnaanta. Fiiri hoos About Phone si aad u aragto haddii ay jiraan wax updates oo cusub oo diyaar. Waxaa intaa dheer, sii akhriska ku saabsan qalab ee wararka socda updates.
3. saar barnaamijyadooda la rabin
Waa inaad xajisaan Chine ay muhiim tahay in adiga iyo si joogto ah loo isticmaalo. Haddii app weli la isticmaalin in ka badan 2-3 toddobaad fadlan ka saar. App ordo ku saabsan asalka ah kaas oo kor u isticmaalaa boos iyo RAM. Sidaa darteed, hoos u waxqabadka telefoonka. Waxaad mar walba isticmaali kartaa software dhinac saddexaad oo ah in la ogaado oo Chine waa barnaamijyadooda la rabin. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan rabin in uninstall, ugu yaraan iyaga gab.
4. hababka loo baahnayn Disable
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee in qalab aad noqotaa mid gaabis ah, sababtoo ah waa laguu furo barnaamijyadooda aad u tiro badan waqti isku mid ah! Waxba ma leh haddii aad dib ugu screen guriga ka socday ka dib markii aan ciyaarnay kulan - ciyaarta weli ordi karaan ee asalka ah, inaad qaadato lacagta badan ee RAM iyo markeeda ayuuna qalabka.
Waxaa jira geedi socodka asalka badan oo socda ku saabsan qalabka in ay qaadataa RAM waxay kor iyo sidoo kale meel lagu kaydiyo. Waxaad dhab ahaan doonayaan doona inay ku sii geedi socodka soo jeeda, kuwaas oo in ugu yaraan. Waxaad isticmaali kartaa software xisbiga saddexaad in la socotid ku saabsan habka asalka iyo siinaysaa aad xakameeyo on iyaga dilaaga. Waxaad mar kasta u tagi kartaa Tababaraha barnaamijyadooda iyo iyaga gab ka soo muuqday oo ay ka saareen sida la bixin kari.
5. Cusboonaysii barnaamijyadooda aad
Sida la xariirta nidaamka qalliinka, waxaa muhiim ah in aad sii Apps updates. Isku day inaad sii gaadhsiin update ku saabsan oo kuu ogolaanaya in aad telefoon soo bixi mar kasta oo la heli karo. Horumarinta had iyo jeer isku dayaan in ay u xaliyo arrimaha jir ah oo ku dar qaababka cusub in la hagaajiyo waxqabadka iyo xawaaraha aad telefoonka. Horumarinta marnaba rabin in user inay halgan kula jiraan baraf app ama ka danbayso navigation. Updates New dari xasiloonida inay app ah oo halkan, xasiloonida, waayo, waxaad telefoon.
6. Isticmaalka kaadhka xusuusta wanaagsan
Inta badan kaadhka xusuusta hoos culeyskiisu telefoonka haddii aad leedahay telefoonka wanaagsan laakiin xasuusta gudaha u hooseeya. Ku darista kaadhka xusuusta-xawaaraha sare loogu qaado kartaa telefoon kasta oo la xasuusta gudaha u hooseeya. Waxa kale oo aad ku dari kartaa awoodda si kaadhka xusuusta-xawaaraha sare ee sida. Waxaad mar walba isticmaali kartaa inta u dhaxaysa 2 GB in 32 GB ku saabsan telefoonka. Had iyo jeer isticmaal Class 6 ama Class 10 aallada Android haddii doonayaan qaab weyn ee aad taleefan.
7. widgets yar oo shaashadaha guriga
Widgets sameeya eegi qabow oo wax ku ool ah, laakiin ilaa qaadataa weyn ee baytari iyo RAM. Ku darista widget ah shaashadda waa ilaalinta app socda ee 24x7 asalka. In ugu yaraan dhig screen guriga. Waxaad haysan karto ugu badnaan saddex iyo inta ugu yar ee widgets. Haddii aad rabto in aad ku darto gacanta ku dheereeyey sida Wi-Fi, Bluetooth ama GPS. Number of screen guriga iyo widget ma aha oo kaliya hoos u qabadka laakiin daadi baytari si dhakhso ah.
8. Iska ilaali wallpapers live
Fiirin coolest iyo madadaalo ee wallpaper laga yaabaa in aad ku kacaysaa waxqabadka iyo nolol batteriga. Haddii aad isticmaalayso wax wallpaper nool, kaxeeyo oo aad arki doonaan farqi ballaaran degdeg ah ee wax qabadka. Live wallpaper ayaa habka baadhitaanka taariikhda iyo kor u qaadataa oo aad u badan ee RAM iyo processor wareegyada. Haddii ay suurtagal tahay, loo yareeyo shaqsinimo isticmaalaya theme iyo wallpaper nool. Isticmaal wallpapers fudud oo caadi ah oo kaliya.
9. Stop .Wadashaqayntaas auto
Nidaameed waa sifooyinka weyn u hesho dhammaan fariimaha, updates iyo qaar badan oo waqtiga. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale aad u badan oo aad RAM, kaydinta iyo xogta ay qaataan. Nidaameed hubiyo updates cusub ee Chine kasta bareeg joogto ah kaas oo noqon kara ilaa 5 daqiiqo. Saasuuna mar kasta waxa ay u muuqataa telefoonka arki nabaad-yar ee waxqabadka. Waad haysan kartaa hagaagsan ee u barnaamijyadooda asaasiga ah sida Gmail, farriimo iwm laakiin iska sii kale haddii aan loo baahnayn.
10. iska noqda Animations
Haddii aad rabto in aad horumarinta iyo batari waara, mar walba dami animations ah. Wax macno ah ma haddii aad telefoonka ayaa ah 3,500 Mah batari ama 1,500 oo ka mid ah, animations iyo wallpapers live quruxsan si deg deg ah daadi karaa batteriga.
Animations diyaar u yihiin inay ku siinaya yeeesha raadinaya animation laakiin waxa aanu xaqiro waxqabadka. Haddii aad iyaga dami, aad u jeestay oo ah habka baadhitaanka taariikhda dheeraad ah iyo in kastoo eegi doonaa faham ka, waxaa soomi lahaa iyo barnaamijyadooda ku shaqeeyaan si wacan uga. Tip Tani waa lagama maarmaan u ah dadka isticmaala culus oo ay u badan tahay waxa ay noqon doontaa waa in la helo qaab ugu sareeya.
On joogto ah ku salaysan, oo aad sii iskaanka telefoonka ee virus oo nadiif ah kayd ah. Impossible, isku day in aad warshad damiyo telefoonka dhawr bilood oo kasta, taas oo kaa caawin doona inaad sii wado qaab si mug leh muddo dheer.
> Resource > Android > The Top 10 Nasteexo Nadaafadda iyo noolee aad Android